ကျော်ခ| August 31, 2012 | Hits:20,568
မောင်တော မွတ်စလင် ၄၈ ဦး အသတ်ခံရမှု သတင်း စုံစမ်းရန် နိုင်ငံတကာ တောင်းဆိုမှု အစိုးရ ပယ်ချကျောင်းကုန်း အဓိကရုဏ်း သံသယရှိသူ ၁ ဦး လွတ်မြောက်နေဆဲသံတွဲ၌ တည်ငြိမ်နေသော်လည်း အဖမ်းအဆီးများရှိအကြမ်းဖက်မှုများ ဆက်ဖြစ်နေမှု အသွင်ကူးပြောင်းရေး ထိခိုက်နိုင်ဟု ICG ထုတ်ပြန်ကချင် နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်
29 Responses LeaveaReply Cancel reply
snow August 31, 2012 - 6:53 pm ရုရှားပြန်အပတ်စဉ်(၄၉)ကသူတွေပါလားသိချင်တယ်။နာမည်နဲ့
Reply Virtual boy September 1, 2012 - 11:12 pmိရုရှားပြန် က မန်းလေးကဆိုရင်တော့ ၆၂ လမ်းမှာနေတဲ့ ဗိုလ် တစ်ယောက်တော့ကျတဲ့ထဲပါတယ်လို့ကြားတယ့်
Reply mg win August 31, 2012 - 9:22 pm good news!!! free kachinland
Reply htay aung tint September 3, 2012 - 1:46 pm ဒီနေရာတွေ က အရင်က အေးချမ်းတဲ့နေရာလို့ ထင်ပါတယ်
Reply Soe Thura September 1, 2012 - 12:25 am ဧရာဝတီ အဖွဲ့သားများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျန်းမာပါစေ။
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ September 1, 2012 - 2:11 am ဘယ်ဘက်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အရပ်သားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စစ်သားဖြစ်ဖြစ်၊ အခုတော့ လူ့အသက်တွေ အများကြီး သေ၊ ပစ္စည်းတွေလဲ ပျက်ဆီး၊ အိမ်တွေလဲ ပျက်ဆီး။ ပစ်မိန့်ပေး တိုက်ခိုင်းသူတွေ နည်းနည်းလောက် ခေါင်းအေးအေးထား ပြန်စဉ်းစားကြပါဦး။ ဘာအတွက်တိုက်နေကြတာလဲ။ ဘာလို့ ပစ်ခတ်နေကြတာလဲ ဆိုတာ။ ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ကာမိရဲ့လား။ ပစ္စည်းပျက်တာ ပြန်ဆောက်လို့ ရတယ်။ သေသွားကြတဲ့ အသက်ဆုံးသွားသူတွေ ပြန်မရနိုင်ဘူး။ မိသားစုတွေကိုယ်စား ကိုယ်ချင်းစာကြပါဦး။ လုံခြုံရာ အဝေးရပ်ကနေ ကိုယ့်မာနကြောင့် သူများအသက်ကို စတေးမနေပါနဲ့။
Reply မမ September 1, 2012 - 1:42 pm ဟုတ်ပတော်မြန်မာတိုင်းရင်းသူပြောတာကိုလုံးဝထောက်ခံပါတယ်။သတ္တိရှိရင်စီးချင်းထိုး
Reply swe htwe September 1, 2012 - 6:52 pm I agree to you. We blame the leaders of both sides. Do you ever think about the families of decead?You,both sides leader.are nothing. You only take care of yourselves not your citizens.
Reply မမ September 1, 2012 - 1:40 pm KIA ရေနိုင်ငံတစ်ကာစစ်စည်းကမ်းတွေဘာတွေသိပ်ထိန်းသိမ်းမနေနဲ့တော့ချသာချတော့။
Reply မင်းခေါင် September 1, 2012 - 2:34 pm တပြည်ထဲနေသူချင်းသတ်ကြတာကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်
Reply ko September 1, 2012 - 3:11 pm it is bed new both are nation and brother they have father mother and san.Nown their family is tear full.I am very sorry.I went to hope safe fire and stop the fight.
Reply Clicker September 1, 2012 - 3:15 pm ကချင်ပြည်ကို KIA တွေအုပ်ချုပ်ခိုင်းလိုက်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေလိုင်ဇာမှာအလုပ်လုပ်တုန်းကပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာ….. အလကားနေရင်း ရန်ရှာပြီးမိုက်ကြေးခွဲ….. လူကိုလည်း ရိုက်နှက်သေးတယ်။
Reply Myochit September 1, 2012 - 10:33 pm နင်တို့တွေစစ်မတိုက်ရတော့ပြောအားရှိတာပေါ့။ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာတစ်ရက်လောက်
Reply Rakhine Zarni September 2, 2012 - 10:54 am kIA က ရော ဆင်းရဲသားပြည်သူကိုပြန်ကြည့်မှာသေချာရဲ့လား အခုတောင်ကွမ်းယာဆိုင်ကအစဆက်ကြေးပေးနေရတာ
Reply jhmw September 2, 2012 - 2:38 pm Burma was never been rule of law, there only rule by law, so the battles were going on until today.
Reply AK September 2, 2012 - 10:03 pm ကေအိုင်အေကို မမုန်းချင်ပါ
Reply အောင်ဇေယျ September 3, 2012 - 6:07 pm KIA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ(သူပုန်)တွေအနေနဲ့တိုင်းရင်သားလူမျိုးတွေဘာအကျိုးမှ
Reply pps12345 September 3, 2012 - 10:56 am This is great victory for KIA.
Reply ဘုရင် September 3, 2012 - 11:43 am စစ်ပွဲဆိုတာမကောင်းဘူး။ မြန်မာပြည်မှာစစ်ပွဲတွေမရှိသင့်တော့ပါဘူး။ KIA အဖွဲ့အနေနဲ့ အစိုးရ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ပါ။ ဘယ်သူပဲသေသေ အားလုံးဟာ မြန်မာပြည်သားတွေ ချည်းပါပဲ။
Reply ကချင်လေး September 3, 2012 - 6:08 pm အမှန်တရားအတွက်သာ အသက်ကိုစတေးပါ။ပြည်သူ့မျက်နှာ ကြည့်ပေးပါ။ထမင်းငတ်နေပြီ။
Reply swe htwe September 4, 2012 - 12:32 am That’s right.
Replyုkyaw soe September 4, 2012 - 1:53 pm တရေထဲနေ တရေထဲသောက် ညီအကိုမောင်နှစ်မ အချင်းချင်း တိုက်မနေဘဲ ပြည်သူတွေမျက်နှာ ကြည့်ပြီး တိုက်ပွဲတွေ အမြန်ဆုံး ရပ်သင့်ပါပြီ…………
Reply ကိုလင်း September 5, 2012 - 3:16 pm မြန့်မာ့တပ်မတော်ဟာ ကချင်ဒေကိုစစ်မြေပြင်လို့မြင်ဟန်မရှိပါဘူး .. တပ်တွေရဲ့တိုက်စွမ်းရည်နဲ့ လက်နက်သစ်တွေစမ်းသပ်တဲ့နယ်မြေလို့ယူဆဟန်တူပါတယ် .. နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနာဂတ်တပ်မတော်အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေထွက်လာမယ်လို့ ဦးစီးချုပ်သစ်ကယူဆဟန်တူပါတယ်..
Reply mandalaythar September 5, 2012 - 4:23 pm my brother is died.
Reply Hso Ngan September 7, 2012 - 1:19 pm Good Bamar.
Reply နေမင်း September 8, 2012 - 6:35 pm ….
Reply Phakant-Thar. September 9, 2012 - 11:04 am I invite all to come Phakant, for to getafew consideration.
Reply aung gyi September 17, 2012 - 12:04 am ကချင် တွေ က လ ည်း သူ တော် ကောင်း တွှေ မ ဟုတ်ြ က ပါ ဘူး ။ တို က် မယ့် တို က်
Reply bohtut123 December 20, 2012 - 10:34 pm အဓိကတရားခံကအာဏာရူးနေ၀င်း။ပြီးတော့သန်းရွှေ။အခုသန်းရွှေလက်ကိုင်တုတ်မင်းအောင်လှိုင်